စီးပွားရေးအမျိုးအစားများ - Corporations, LLCs နှင့် Partnerships များကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ
သငျသညျထည့်သွင်းမတိုင်မီလျင်မြန်စွာ entity ဝိသေသလက္ခဏာများကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့ဒီဇယားကိုသုံးပါ။ စီးပွားရေးအမျိုးအစားများ၊ အခွန်ကောက်ခံမှု၊ နှိုင်းယှဉ်မှုများနှင့်ကော်ပိုရေးရှင်းအမျိုးအစားများအကြောင်းထပ်မံသိရှိလိုပါကအောက်ပါလင့်ခ်များတွင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
LLC နှင့် S ကော်ပိုရေးရှင်းကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ
ကော်ပိုရေးရှင်း vs. LLC အခွန်
ကို C ကော်ပိုရေးရှင်း
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတရားစွဲဆိုသောအခါပိုင်ရှင်များအဘို့အတရားစွဲဆိုမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး? NO ဟုတ်သည် ဟုတ်သည် ဟုတ်သည်
ပိုင်ရှင်တရားစွဲခံရသောအခါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှု? NO NO NO ဟုတ်သည်
အပိုဆောင်းစီးပွားရေးအခွန်ဖြတ်တောက်မှုရရှိနိုင်ပါ? NO ဟုတ်သည် ဟုတ်သည် ဟုတ်သည်
စီးပွားရေးအမြတ်တွေအပေါ်ဘယ်သူ့ကိုအခွန်ကောက်ခံသလဲ။ ပိုင်ဆိုင်သူ အသင်း အစုစပ်ပါဝင်သူ သင်၏ရွေးချယ်မှု - ပိုင်ရှင်သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီ
ဘယ်အချိန်မှာသုံးစွဲဖို့? အားမပေးပါ ပုဂ္ဂလိက ၀ င်ငွေခွန်များနှင့်အများပြည်သူရောင်း ၀ ယ်သည့်ကုမ္ပဏီများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကစီးပွားရေးကုန်ကျစရိတ်များကိုနုတ်ရန်ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအခွန်အခများလျှော့ချခြင်းဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုပိုင်ဆိုင်ရန်။ ပိုင်ရှင်သည်ကော်ပိုရေးရှင်းမှအမြတ်အစွန်းအများစုကိုသူကိုယ်တိုင်ပေးလိမ့်မည်။ အိမ်ခြံမြေပိုင်ဆိုင်ရန်။ ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအတွက်ငွေသားကိုင်ဆောင်ထားရန်။ တ ဦး တည်းရဲ့ကော်ပိုရေးရှင်းအတွက်စတော့ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်ရန်။
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား အနည်းငယ်သာ - မြင့်မားသောတာ ၀ န်ယူမှုနှင့်ဤတွင်ဖော်ပြထားသောအခြားနည်းလမ်းများထက်အခွန်ဖြတ်တောက်မှုနည်းပါးခြင်း။ ၀ င်ငွေ၏ပထမဆုံးဒေါ်လာ ၅၀,၀၀၀ အပေါ်အခွန် ၁၅% သာအခွန်ပေးဆောင်သည်။ အခွန်အပေါ် 15.3% သိမ်းဆည်းပါ။ မိမိကိုယ်မိမိသေးသော်လည်းအကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်ရှိသောလစာကို ပေး၍ ၁၂.၄% လူမှုဖူလုံရေးနှင့် ၂.၉% Medicare ကိုစုဆောင်းရန်အတွက်စုစုပေါင်းစုငွေ၏ ၁၅.၃% ကို ၀ င်ငွေ၏ဤအပိုင်းတွင်စုဆောင်းသူများအားဖြန့်ဝေသူအဖြစ်ပေးချေပါ။ ပိုင်ရှင် (အသင်း ၀ င်) ကိုတရားစွဲဆိုသောအခါ LLC ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသိမ်းဆည်းခြင်းမှကာကွယ်ရန်ဥပဒေတွင်ပြဌာန်းချက်များရှိသည်။
အခွန်ကောက်ခြင်း တစ် ဦး တည်းသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအနေဖြင့် - ၀ င်ငွေအားလုံးသည်ပိုင်ရှင်ထံစီးဆင်းသည်။ ကော်ပိုရေးရှင်းမှဖြတ်တောက်ပြီးနောက်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အခွန်ပေးဆောင်။ (“ အမြတ်အစွန်းအတွက်” ကော်ပိုရေးရှင်းများအားလုံးကို C ကော်ပိုရေးရှင်းများအနေဖြင့်ပုံမှန်အားဖြင့်အခွန်ကောက်ခံသည်။ ) အစုရှယ်ယာရှင်များသည်နှုတ်ယူပြီးမှအခွန်ပေးဆောင်သည်။ (S ကော်ပိုရေးရှင်းအဆင့်အတန်းရရှိရန်အတွက်ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုတင်ရမည်) အစုရှယ်ယာရှင်များသည်အမေရိကန်နိုင်ငံသားသို့မဟုတ်နိုင်ငံခြားသား be ည့်သည်များသာဖြစ်နိုင်သည်။ သင်၏ရွေးချယ်မှု။ တစ် ဦး တည်းသောစီးပွားဖြစ်၊ လက်တွဲမှု၊ C ကော်ပိုရေးရှင်းသို့မဟုတ် S ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုအဖြစ်အခွန်ကောက်ခံနိုင်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် - ပိုင်ရှင်တစ် ဦး တည်းသာပိုင်ဆိုင်လျှင်ပိုင်ရှင်နှစ် ဦး သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောပိုင်ရှင်များအဖြစ်အခွန်ကောက်ခံသည်။ အခွန်ပုံစံကို C ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုအဖြစ်အခွန်ကောက်ခံရန်နှင့် S ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုအနေဖြင့်အခွန်ကောက်ခံရန်ထပ်ဆောင်းပုံစံကိုတင်ပြပါ
ပိုင်ဆိုင်မှု တစ် ဦး တည်းသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်း အစုစပ်ပါဝင်သူ အစုစပ်ပါဝင်သူ အဖှဲ့ဝငျ
ခေါင်းဆောင်မှု တစ် ဦး တည်းသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်း အရာရှိ / ဒါရိုက်တာ (ယေဘုယျအားဖြင့်တူညီသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်သည်) အရာရှိ / ဒါရိုက်တာ (ယေဘုယျအားဖြင့်တူညီသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်သည်) မန်နေဂျာ / အသင်း ၀ င် (ယေဘူယျအားဖြင့်တူညီသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်သည်)
အရင်းအနှီးမြှင့်တင်ခြင်း ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရအာမခံထားသောပိုက်ဆံချေးပါ ပိုင်ရှင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအာမခံချက်မရှိဘဲအရင်းအနှီးတိုးမြှင့်ဖို့စတော့ရှယ်ယာရှယ်ယာရောင်း (သက်ဆိုင်သောဥပဒေများမှဘာသာရပ်) ပိုင်ရှင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအာမခံချက်မရှိဘဲအရင်းအနှီးတိုးမြှင့်ဖို့စတော့ရှယ်ယာရှယ်ယာရောင်း (သက်ဆိုင်သောဥပဒေများမှဘာသာရပ်) ပိုင်ရှင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအာမခံချက်မပါဘဲအရင်းအနှီးတိုးမြှင့်ဖို့အဖွဲ့ဝင်အကျိုးစီးပွားရောင်း (သက်ဆိုင်သောဥပဒေများမှဘာသာရပ်)
လမ်းညွှန်စာရွက်စာတမ်းများ အဘယ်သူမျှမ ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ operating သဘောတူညီချက်
ပိုင်ဆိုင်မှုစာရွက်စာတမ်းများ အဘယ်သူမျှမ ရှယ်ယာ ရှယ်ယာ operating သဘောတူညီချက် / အသင်းဝင်ယူနစ်
နှစ်ဆအခွန်လိုအပ်ပါသလား။ NO ခွဲဝေပေးဆောင်မှသာ။ ထို့ကြောင့်အမြတ်ဝေစုများထက်လစာနှင့်အပိုဆုကြေးများကိုပေးဆောင်ပါ။ NO NO
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကပိုင်ရှင်ကိုလစာနှုတ်ပေးနိုင်မလား။ NO - စီးပွားရေးနှင့်ပိုင်ရှင်သည်အခွန်အကောက်အတွက်တူညီကြသည်။ ဟုတ်သည် ဟုတ်သည် ဟုတ်သည်
*“ C” နှင့်“ S” အက္ခရာများသည် IRS အခွန်ကုဒ်နံပါတ်များကိုကိုယ်စားပြုသည်။ C ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့် S ကော်ပိုရေးရှင်းတို့သည်ကော်ပိုရေးရှင်းအမျိုးအစားများမဟုတ်ဘဲကော်ပိုရိတ်အခွန်အမျိုးအစားများ။
** အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအားမည်သို့အခွန်ကောက်ခံသည်နှင့်ပိုင်ရှင်အားတရားစွဲမှုမှမည်သို့ကာကွယ်ပုံသည်သီးခြားကိစ္စနှစ်ခုဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, တစ် ဦး တည်းသောစီးပွားဖြစ်ပိုင်ရှင်များအဘို့တရားစွဲဆိုမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုမပေးပါဘူး။ သို့သော်တစ် ဦး တည်းသောစီးပွားဖြစ်လုပ်ခအဖြစ်အခွန်ကောက်ခံသော LLC ။